RASMI: Goolhaye Manuel Neuer oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Bayern Munich… (Imise sano ayuu saxiixay?) – Gool FM
Haaruun May 23, 2022
(Munich) 23 Maajo 2022. Goolhaye Manuel Neuer ayaa heshiiska u kordhiyey kooxdiisa kubadda cagta Bayern Munich, waxaana uu gaarsiiyey ilaa sanadka 2024-ka.
Kabtanka Kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Jarmalka ee Manuel Neuer ayaa maanta oo Isniin ah u saxiixay kooxdiisa heshiis cusub oo hal sano ah.
Goolhaye Neuer ayaa kooxdiisa Bayern Munich ku hoggaamiyey horyaalkoodii 10-aad ee Bundesliga oo xiriir ah, waxaana uu noqon doonaa 38 sano jir marka uu dhammaado qandaraaskan cusub oo uu maanta qalinka ku duugay.
Markii uu heshiiska cusub u saxiixay Bayern waxa uu yiri Neuer: “Aad ayaan ugu faraxsanahay in wadadayda Bayern ay sii socoto, waxaan markale heli doonaa koox aad u fiican oo aan kula guuleysan karno koobabka oo dhan, ka Goolhayenimo ahaa, kabtan ahaa iyo ciyaaryahan muhiim ah ahaanba waxaan rabaa in aan noqdo qodob go’aamiya hadafyadayada waa weyn.”
“Waxaan rabaa inaan kordhiyo guulaha xiriirka ah ee horyaalka oo aan u tartanno koobabka DFB Pokal iyo Champions League.”
Hasan Salihamidžić: “Aad ayaan ugu faraxsanahay in Manuel Neuer uu noo kordhiyo heshiiska ilaa 2024-ka, Manuel waxa uu tan iyo 2011 ka ciyaarayay FC Bayern, waa kabtankeenna, waxa uu ahaa goolhayaha ugu fiican adduunka sannado badan, dabcanna waa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan.”
Neuer oo sanadkii 2014 ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa ka tagay sanadkii 2011 naadiga Schalke, waxaana uu ku biiray Bayern Munich, isagoo kula guuleystay Champions League 2013 iyo 2020, isagoo 472 kulan u saftay kooxda.
Si kastaba ha noqotee, mustaqbalka Weeraryahannada Bayern Munich ee Robert Lewandowski iyo Serge Gnabry kuwaasoo qandaraaskoodu uu ku eg yahay sanadka 2023-ka, isla markaana aysan jirin wax wahadallo ah oo muujinaya in qadnaraasyo cusub laga saxiixo.